May Nyane: စာအုပ်နှစ်အုပ်
ဟောဗျာ...ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ အစ်မရယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက် ကပဲဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းပေးမယ်ဆို ပြီး....၊ ဒီနေ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်းမှာဝယ်ရင်တောင် ဘယ် စာအုပ်မဆို ဒီလောက်တော့ပေးရတာချည်းပါပဲ၊ အင်းလေ....အခုလိုဆိုတော့လည်းအားလုံးက စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်းမှာ အမြန်ဆုံးဖတ်လို့ရတာပေါ့လေ၊ စေတနာ အတွက်လေးစား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သတ္တမနည်းပညာရပ်ဝန်း မှာ ထပ်ဆင့်မျှဝေခွင့်ပြုပါ။
ရပါတယ်။ တင်ပါ။ ပြန့်လေကောင်းလေပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ။ အရေးမကြီးတဲ့ လမ်းနာမည် အမှားလေးတခုကို ပြောပါရစေ။ ခရစ်လမ်းက အခု ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ် (သိမ်ဖြူလမ်း မဟုတ်ပါဘူး)။
နောက်ပြီး ဆရာမတို့ အသင်းရန်ပုံငွေအတွက် ကူညီချင်ရင် ဘယ်လို့ဆက်သွယ် ပေးပို့ရမယ် ဆိုတာ ပြောပေးပါဦး။
peti ရေ.. ဘယ့်နှယ့်အရေးမကြီးရမလဲ.. သိပ်အရေးကြီးတာပါ။ ကိုယ်တိုငက အမှားကို ထောက်ပြနေပီး ကိုယ်က မှားသွားလွဲသွားတာ။ မှန်ဖို့ သိပ် အရေးကြီး ပါတယ်။ဘ နောက်ဆက်တွဲနဲ့ ပြင်ရင်ထည့်ရမှာပါ။ ကျေးဇူးပါ။ ရန်ပုံငွေကိစ္စကတော့ နောက်များမှပဲနော်။
Blogger handbook အတွက်ကျေးဇူးပါဆရာမ။
hehe. teacher is joking. now is available free of charge. I was thinking of how to transfer that 3euro to you..thanks for sharing ..tee tee